【Huawei အသုံးပြုပုံစည်းကမ်းချက်】 - Huawei Consumer
ယခု ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု မလေ့လာမီ သင့်အနေဖြင့် ယခုသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှု နားလည် လက်ခံထားရှိရမည်။ အကယ်၍ သင် နားလည်လက်ခံမှု မရှိပါက သင့်အနေဖြင့် ယခု ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ချက်ခြင်း ပိတ်၍ ထွက်ခွာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Huawei သည် ယခုသက်မှတ်ချက်များကို သင့်အား အကြောင်းမကြားဘဲ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပြုပြင် ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ အကယ်၍ ယခုသက်မှတ်ချက်များနှင့် ပါတ်သက်၍ အကြောင်းတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့ Huawei အနေဖြင့် မှန်ကန်သော တရားရေး စီမံ ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။.
ယခု ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် Huawei ၏ မူပိုင် ဖြစ်ပါသည်။ Huawei (သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ကူးယူအသုံးချခြင်း၊ လင့်ခ်ပြုလုပ်၍ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ "mirroring method" ဖြင့် အခြားသော ဆာဗာများတွင်ထားရှိခြင်း၊ အကြောင်းအရာများကို retrieval server တွင် သိမ်းဆည်းထားရှိခြင်း (သို့) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသုံးပြုမှု အတွက်ဖြစ်စေ၊ အခြားအခြားသော အသုံးပြုမှုများအတွက်ဖြစ်စေ ကူးယူအသုံးချခွင့် ပြုမည် မဟုတ်ပါ။.
ယခု ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပါဝင်သော အသုံးပြုထားသော ရည်ညွှန်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် နှင့် အမှတ်အသား အားလုံးသည် Huawei ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော အခြားသော အဖွဲ့အစည်း များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် Huawei (သို့) အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော အခြားသော အဖွဲ့အစည်း များကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲ မိမိ၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ရယူ အသုံးပြုခွင့် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။.
ယခု Website နှင့် website တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် သုံးစွဲရအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပြုလုပ်ပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ Huawei သည် ယခု website တွင် တိကျသော အချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားသော်လည်း ထိုအချက်အလက်များ၏တိကျမှုသည် Huawei နှင့် မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်မှု သို့) တာဝန်ယူမှု မရှိဟု ယူဆထားပါ။ Huawei အနေနှင့် ထို website တွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ သို့ Products များကို အချိန်မရွေး အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ယခု website တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များအားလုံးသည် အာမခံများ သို့ ကိုယ်စားပြုပစ္စည်းများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ လက်ရှိအခြေအနေများကိုသာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Huawei မှ ဖော်ပြလိုသည်မှာ ဥပဒေအရအပြင်းအထန်တားမြစ်ထားသော သို့ ပြဌာန်းဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသော အာမခံများ သို့ ကိုယ်စားပြုပစ္စည်းများကို ချိုးဖောက်အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။.
ဤ website နှင့် ဆက်နွယ်၍ (သို့) ဤ website ကို အသုံးပြု၍မရခြင်း (သို့) ဤ website တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများအား ယုံကြည်ရမှုနှင့် ပတ်သက်သော တိုက်ရိုက်ညွန်ကြားချက်များ၊ သွယ်ဝိုက်ညွန်ကြားချက်များ၊ အထူးကိစ္စရပ်များ၊ အကျိုးသက်ရောက်စေသောကိစ္စရပ်များ၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းများ၊ လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှု၊ အချက်လက်များပျောက်ဆုံးမှု၊ ၀င်ငွေသို့ အမြတ်များဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအပြင် အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့ ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပွားစေနိုင်မှုကို Huawei အနေနှင့် အကြံပေးခြင်းခံရစေကာမှု ထိုကိစ္စရပ်များသည် Huawei ကုမ္ပဏီ သာမက Huawei ၏ အသင်းအဖွဲ့များ၊ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ အခြားကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပါ မည်သို့မျှ ပတ်သက်ခြင်း၊ တာဝန်ရှိခြင်းမရှိပါ။.
ဤ website တွင် ဖော်ပြထားသော ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ရရှိမှုနှင့် ထို ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော ဖော်ပြချက်များသည် သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံ၊ ဒေသနှင့် လိုက်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော တိကျသော အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက မိမိတို့နိုင်ငံရှိ Huawei အရောင်းဆိုင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များကို မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။.
အခြား websites များသို့ သွားရောက်နိုင်သည့် links
ယခု Huawei website တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အခြား website များသို့ ဆက်သွယ်သွားရောက်သည့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း (links) များ ပါဝင်သော်လည်း ထို websites များတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် Huawei နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို website များကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင့်အနေနှင့် ဖော်ပြပါစည်းမျဉ်းများကို နားလည်အောင် ဖတ်ရှုထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် website တွင် Huawei မှ ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများ၊ ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများသည်လည်း ထို link နှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။.
လျှို့ဝှက်နံပါတ် အသုံးပြုထားသည့်နေရာ (သို့) လုံခြုံရေးရှိသောနေရာများသို့ ၀င်ရောက်ရန်
ယခု websites တွင် ၀င်ရောက်ရန်အသုံးပြုခွင့်ရှိသော သုံးစွဲသူများသာလျှင် လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသုံးပြုထားသောနေရာ (သို့) လုံခြုံရေးရှိသောနေရာများသို့ ၀င်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုခွင့်မရှိသော သုံးစွဲသူများအနေနှင့် ထိုနေရာများသို့ ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းပါက အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။.
ဥပဒေ နှင့် တရားဝင်အာဏာပိုင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု
ယခု အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၏ ဥပဒေ ပေါ်တွင် မူတည်၍ အခြေခံတည်ဆောက်ထားခြင်း ပြန်ဆိုပြဌာန်း ထားခြင်းဖြစ်သည်။.